Manampy amin'ny fananganana toeram-piompiana an-dranomasina maitso ny Jwell Machinary! - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Manampy amin'ny fananganana toeram-piompiana an-dranomasina maitso ny Jwell Machinary!
Fotoana: 2019-03-30 Hits:
Ny kolontsaina amoron-dranomasina nentim-paharazana ao anaty tranom-borona dia matetika mampiasa tranom-borona vita amin'ny hazo, rakitry hazo fanjonoana ary busa-plastika. Hiteraka fandotoana lehibe any amin'ny faritry ny ranomasina mialoha sy aorian'ny famokarana sy ny fambolena izany, ary malemy koa amin'ny fanoherana ny onjan'ny rivotra sy ny fanoherana ireo loza mety hitranga. Amin'izao fotoana izao, ny vahaolana vahaolana natolotry ny Jwell Machinar dia misy ny plastika fanjonoana plastika fantsom-pitrandrahana + milina fanodinana siny mitsingevana + fantsona fantsom-pitaterana an-dranomasina, izay fironana amin'ny fiompiana an-dranomasina amin'ny ho avy. Ity vokatra ity dia manana andian-tombony, toy ny fiarovana ny tontolo iainana maitso, ny famerenana amin'ny laoniny, ny fanoherana ny rivo-doza, ny anti-antitra, ny anti-ultraviolet ray sns. Miantoka ny tontolo iainana tontolo iainana an-dranomasina tsy ho potika. Nampiakarina any ivelany izy io. Ny faritra miompana amin'ny fambolena amoron-dranomasina dia mipaka tsikelikely.
Ny pedal marinina dia vita amin'ny polyethylene avo lenta (HDPE, atiny (> 95%) ho akora fototra ary voahodina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fitrandrahana. Afaka ampifandraisina, amboarina, atambatra ary hapetraka amin'ny endrika maro izy ireo amin'ny alàlan'ny fanampian'ny vy na plastika hafa. arakaraka ny filàna marina na ny famolavolana injeniera, ary ampiasaina amin'ny vokatra mitsingevana eny ambonin'ny rano sy ny tany amin'ny toerana toy ny wharf, pontoons ary lampihazo.
Ny pedal an-dranomasina dia karazana vokatra fiarovana tontolo iainana vaovao, izay misy mpiasan'ny antistatika, antioksidan ary anti-UV ultraviolet. Izy io dia niforona tamina dingana iray, tsy misy seam ary tsy misy seepage. Mihaona amin'ny ASTM, CE an'ny Vondrona eropeana ary GB9687-1988 fenitra ara-pahasalamana ho an'ny American Material and Testing Association. Izy io dia manana antioxidant, anti-corrosive, afaka amin'ny fikaohon-dranomasina, fandotoana ary fahasimban'ny tontolo iainana. Izy io dia mety amin'ny fampiasana voajanahary amin'ny tontolo voajanahary toy ny tara-masoandro mahery, fandrobohana rano (ranomasina) sns.
Sarin-tsipika fampidinana an-dranomasina an-dranomasina
Volavola matihanina mitsinkafona an-dranomasina avy any amin'ny milina Jwell
Ny siny mitsingevana, fantatra ihany koa amin'ny modules mitsingevana modular, dia vita amin'ny polyethylene avo lenta (HDPE, atiny (> 95%) ho akora fototra ary voahodina amin'ny alàlan'ny dingan'ny famolavolana. Afaka ampifandraisina, amboarina, hivory ary hapetraka amin'ny endrika maro izy ireo. miaraka amin'ny fanampian'ny faritra metaly na plastika hafa (bolts) arakaraka ny filàna marina na ny famolavolana injeniera, ary ampiasaina amin'ny fifandraisana an-tanety amin'ny rano any amin'ny seranana, pontoona, dobo filomanosana, lampihazo ary toerana hafa. Vokatra izay mitsingevana eny ambonin'ny rano .
Milina mitsingevana sambo mitsingevana an-dranomasina
JWZ-BM30F / 160F / 230F Masinina famolahana tsofina
1. Mety amin'ny famokarana tsipiriany isan-karazany amin'ny siny mitsinkafona.
2. Mampiasà rafitra fitrandrahana avo lenta sy karazana tahiry maty loha.
3. Rafitra fanaraha-maso servo Hydraulika hampihenana ny fanjifana angovo.
Frame System-fantsona an-dranomasina HDPE
Ny rafitry ny tranom-dranomasina mahery vaika dia misy fantsona HDPE.
Ity karazana fantsona ity dia manana tanjaka sy hasiana tsara. Ny fomba fampifandraisana frame dia mahatonga azy io hahay hanoherana ireo onja mahery vaika. Mandritra izany fotoana izany, ny vatan-kazo dia namboarin'ny teknolojia haitao avo lenta amin'ny fahanterana anti-ultraviolet sy ny harafesin'ny fanoherana ny ranomasina. Ny fiainany fanompoana dia mihoatra ny 10 taona. Ireto ny toetran'ny fantsom-panafody HDPE:
(1) Polyethylene dia manana fanoherana ny harafesina tsara, toetra ara-pahadiovana tsara ary androm-piainana maharitra.
(2) Polyethylene dia manana hafanana tsy manam-paharoa sy fanoherana tsara.
(3) Polyethylene dia mahazaka hafanana ambany ambany.
(4) Polyethylene dia manana hamafin'ny vaky tsara miaraka amin'ny fitomboana haingana
(5) Fametrahana mora sy azo antoka ary fampifandraisana ireo fantsona polyethylene
Sarin'ny tsipika fantsona an-dranomasina
Na inona na inona fanadihadiana momba ny masinina nesorina na mila fanohanana mihodina tanteraka ho an'ireo masinina ireo ianao dia aza misalasala mifandray amiko amin'ny WhatsApp / Wechat / Email.
Adiresy mailaka ofisialy Jwell:[email voaaro]
HIVERINAJwell Twin visy tsy misy fanamainana Vine PET Sheet Extrusion
NEXTMpanamboatra avo lenta ireo fitaovana fantsom-boasary insulated ——Sinjia Jwell Masinina